Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Tijaabada Caafimaadka > Qalabka Tijaabada Degdegga ah
Qalabka Tijaabada Degdegga ah waa sanduuq ay ku jiraan reagen kiimikaad si loo ogaado qaybaha kiimikaad, haraaga daroogada, iyo noocyada fayraska. Isbitaalada guud, shirkadaha dawooyinka ee la isticmaalo.
Markaad isticmaalayso, waa inaad soo iibsataa xirmo soosaar gaar ah iyadoo loo eegayo baahiyahaaga tijaabada ah. Haddii aysan ahayn qalab gaar ah, RNA waa la soo saari karaa, laakiin tayadeeda iyo daacadnimadeeda lama dammaanad qaadi karo. Natiijooyinka rT-PCR, Northern blot, Dot blot, Real time RT PCR, chip analysis, polyA screening, in vitro turjumaada, falanqaynta ilaalinta RNase, cloning molecular iyo tijaabooyin kale oo xiga ayaa la saameeyay.
Qiimaha Qalabka Tijaabada Degdegga ah ee la soo dhoofiyo waa mid sarreeya, qiimaha hal tijaabo ah waa mid aad u sarreeya, looma baahna in la iibsado tijaabada shuruudaha saxda ah ee hooseeya, iyo wareegga dalbashada waa mid dheer (haddii aysan jirin alaab guri, in la raro). ka yimid dibadda, waxay sugi doonaan waqti dheer). Tijaabada soo saarista caadiga ah ee xirmada gudaha ayaa ku filan, qiimuhu maaha mid sarreeya, asal ahaan dhammaan goobta, kharash-ool ah.
Dabcan, marka la eego Qalabka Tijaabada Degdegga ah, saamaynta soo saarista qalabku maahan mid aad u wanaagsan. Dhab ahaantii, qaar ka mid ah hababka soo saarista RNA classical, sida TRIZOL, EDTA, iwm, ayaa sidoo kale aad u wanaagsan, laakiin qalabku waa ku haboon yahay in la isticmaalo, habka qadiimiga waa mid aad u adag.
Qalabka Tijaabada Antigen ee Degdegga ah ee Covid-2019 Colloidal Gold Antibody Kit Igm Igg
Habka ELISA (Covid-2019 Colloidal Gold Antibody Kit IgM Igg Rapid Antigen Test Kit) wuxuu ku salaysan yahay falcelinta unugyada unugyada unugyada muunada lagu tijaabiyay antigen-ka oo lagu dhejiyay dusha polystyrene. Immunoglobulin-ka aan xidhnayn waa la maydhay. Globulin-ka-hortagga bini'aadamka ee enzyme-ka-hortagga bini'aadamka ayaa isku xira kakanaanta antigenantibody tallaabo labaad. Tallaabo cusub oo dhaqid ka dib, isku xidhka xidhxidhan ayaa la soo saaray iyadoo la kaashanayo xal substrate ah (TMB) si loo sameeyo badeeco midab buluug ah oo buluug ah oo isu beddela huruud ka dib marka lagu daro xalka joojinta aashitada
Xirmooyinka Tijaabada Baadhista Reagent ee Covid-2019 Waxay kuxirantahay Platform PCR-waqtiga-dhabta ah
Xirmooyinka Baaritaanka ogaanshaha Reagent ee COVID-2019 waxay kuxirantahay Platform-ka-waqtiga dhabta ah ee PCR Platform-ka-waqtiga dhabta ah ee PCR Platform waxaa loo isticmaalaa ogaanshaha tayada degdega ah ee Novel Coronavirus igm /IgG antibody ee dhiiga bini'aadamka oo dhan, serum, iyo balasmaha. Natiijooyinka waxaa lagu heli karaa indho-indheyn qaawan ilaa 15 daqiiqo gudahood.
Qalabka Tijaabada Dawada Reagent Xirmooyinka Baadhista Baadhista ee Covid-2019 ee Platform-ka-waqtiga dhabta ah ee Pcr
Qalabka Tijaabada Dawada Reagent Qalabka Tijaabada ee COVID-2019 ee Real-Time PCR Platform waxa loo isticmaalaa ogaanshaha tayada degdega ah ee Novel Coronavirus igm /IgG antibody ee dhiiga bini'aadamka oo dhan, serum, iyo balasmaha. Natiijooyinka waxaa lagu heli karaa indho-indheyn qaawan ilaa 15 daqiiqo gudahood.
Qalabka Tijaabada ee Covid-2019
Xirmooyinka tijaabada ee COVID-2019 waxa loo isticmaalaa ogaanshaha tayada degdega ah ee Novel Coronavirus igm/IgG antibody ee ku jira dhiiga bini'aadamka oo dhan, serum, iyo balasmaha. Natiijooyinka waxaa lagu heli karaa indho-indheyn qaawan ilaa 15 daqiiqo gudahood.
Is-Tijaabi PCR A+b Dhexdhexaadinta Kahortagayaasha iyo Antigen-ka Qalabka Tijaabada Degdega ah
Xirmada tijaabinta degdega ah ee PCR A+B Swab dhexdhexaadinta Antibody iyo Antigen ogaanshaha xirmada tijaabada degdega ah: Sanduuq lagu tijaabiyo qaybaha kiimikada, haraaga dawada, noocyada fayraska, iwm
Saxnaanta Sare ee Daawada ogaanshaha Antigen iyo Dhexdhexaadinta Kahortagga Duumada Igg Igm Hiv Hcg Flus Pcr A+b Swab Qalabka Tijaabada Degdega ah
Saxnaanta Sare ee Baadhista Caafimaadka Antigen iyo Dhexdhexaadinta Ka-hortagga Duumada Igg Igm Hiv Hcg Flus Pcr A+b Swab Qalabka Tijaabada Degdegga ah: Sanduuqa lagu tijaabiyo qaybaha kiimikada, haraaga dawada, noocyada fayraska, iwm. Cosbitaalada guud, shirkadaha dawooyinka ee la isticmaalo.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Tijaabada Degdegga ah oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Tijaabada Degdegga ah soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Tijaabada Degdegga ah la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.